Ọnwụ amụrụ ọhụrụ na-agbada n'ụwa niile; US nwere ọkwa 30 n'ụwa maka ịdịmma nke ndị nne ọhụrụ na ụmụaka - Ụwa 2022
Ọnwụ amụrụ ọhụrụ na-agbada n'ụwa niile; US nwere ọkwa 30 n'ụwa maka ịdịmma nke ndị nne ọhụrụ na ụmụaka
Ịdị ndụ nwa amụrụ ọhụrụ gafere izu mbụ nwere ike bụrụ ihe ịma aka karịa ka a na-ahụkarị, ọkachasị na mba ndị enweghị akụrụngwa nlekọta ahụike.
Save the Children na-akọ na ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ụmụaka ndị na-anwụ n'okpuru afọ ise agbadala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 40 kemgbe 1990, a ka nwere ọdịiche dị n'etiti nlekọta ahụike a na-enye ndị nwere ọganihu na ndị na-adịghị mma. A na-ahụ nkewa a n'ofe ụwa, ọkachasị na mba ndị mepere emepe, na-akpata ọnwụ ọjọọ nke ọtụtụ ụmụ amụrụ ọhụrụ.
Chekwa ụmụaka 14th Akụkọ nke State of the World's Mothers kwa afọ n'afọ a na-ekwu na ọtụtụ ọnwụ ụmụ ọhụrụ na-akpata bụ ihe omume ndị a pụrụ igbochi egbochi dị ka ọrịa na-efe efe, nkpagbu, na nlekọta na-adịghị mma. Akụkọ ahụ na-akpalite ndị mmadụ n'eziokwu na ọdịiche dị n'etiti ndụ na ọnwụ nke ụmụ ọhụrụ dị n'aka ndị na-elekọta ha nakwa na ebe ezinụlọ dị nso ma ọ bụ dị anya site na ịda ogbenye ekwesịghịzi ịbụ okwu.
Akụkọ ahụ zoro aka n'ụzọ anọ dị mkpa "ịzọpụta ndụ" nke nwere ike igbochi ọnwụ otu nde n'ime ọnwa mbụ nke ndụ ụmụaka. N'ime ndị a bụ ọgwụ nje, ngwá ọrụ na-eku ume, na ijikwa obere ọgwụ steroid na-adịghị emerụ ahụ nye ụmụaka ndị a mụrụ akabeghị aka maka mmepe na ngụgụ na-arụ ọrụ. Ndị steroid, ikekwe na-akpatakarị arụmụka, na-enye ohere ka anụ ahụ ngụgụ na-eto ngwa ngwa ka nwa ọhụrụ nwee ike ịkwado ahụ ya ma guzogide ịdabere na ngwá ọrụ ụlọ ọgwụ n'ime ọnwa mbụ nke ndụ ya.
Nke kachasị mkpa, azịza niile nke Save the Children tụrụ aro gbakwụnye ihe enyemaka ruru $10 maka nwa ọhụrụ ọ bụla.
Ọ bụ ezie na mba ndị ka na-emepe emepe nwere ọnụ ọgụgụ ọnwụ ụmụ ọhụrụ dị elu karịa mba ndị mepere emepe, ọnụ ọgụgụ dị na mba ndị mepere emepe ka dị egwu. Save the Children na-akọ na ihe karịrị ụmụ ọhụrụ 11,000 na-anwụ otu ụbọchị a mụrụ ha na United States kwa afọ.
"Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmetụta a na, nke ọma, n'ezie ọnụ ọgụgụ ụfọdụ nke ụmụ ọhụrụ na mba ndị na-emepe emepe, karịsịa ndị a mụrụ n'ike, ga-anwụ, ma nke ahụ agaghị adị otú ahụ," Carolyn Miles, CEO nke Save kwuru. Ụmụntakịrị. Ọ gbakwụnyere na ụmụaka niile kwesịrị ịnweta nlekọta ahụike, ma ha si obodo dara ogbenye ma ọ bụ ọgaranya.
Akụkọ nke State of the World's Mothers na-egosi na ụbọchị mbụ nke ndụ nwatakịrị bụ ụbọchị kachasị mma iji hụ na ọdịnihu ya dị mma na ihe ndị a ga-eji zọpụta nwa ahụ dị ọnụ ala. N'ikpeazụ, site na ịmụrụ anya nke ndị nne na nna na ọha mmadụ n'ozuzu, ọnụ ọgụgụ ọnwụ amụrụ ọhụrụ nwere ike ibelata ihe karịrị pasenti 40.